Intsebenziswano ebanzi yamashishini kunye neZithuba nguMoxie | IMarTech Blog
NgoMvulo, Juni 25, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ihlabathi lanamhlanje elikhuphisanayo nelifuna ukhuphiswano lufuna izigqibo ezikhawulezileyo kunye nokwenza ngokukhawuleza, kwaye ngokungathandabuzekiyo kufuna intsebenziswano eyomeleleyo. Izithuba nguMoxie Ndiyathemba ukubonelela abathengisi iseti entsha yezixhobo ezingqamanisa ukuthengisa, inkonzo yabathengi kunye nenkxaso ngaphakathi kwishishini. Ngokulungelelanisa konke, ukufunyanwa, ukugcinwa, kunye nokuphakanyiswa kwamathuba kunokulungelelaniswa ngcono, kwenziwe kwaye kulinganiswe.
Izithuba zikaMoxie zilungele imibutho emikhulu. Ishishini kufuneka liqale ngokwakha amaqela kunye neendawo, kwaye libonelele ngezixhobo ezinje ngemijelo yomsebenzi, iibhlog, iikhalenda, iiforamu zengxoxo, amajelo eendaba, iiprojekthi, i-wikis nayo nayiphi na into eyenye efunekayo ekuphumeleleni nasekuhambeni kakuhle komsebenzi.
Izithuba zikaMoxie ™ zinezinto ezilandelayo ezenzelwa ukuthengisa (ezidweliswe kwi iphepha lomkhiqizo):
A isuti epheleleyo yezixhobo ukufikelela kubathengi bakho naphi na apho bakhoyo, ngokusebenzisana nabo, ulwazi, i-imeyile, ingxoxo, uluntu, imidiya yoluntu, ukukhangela, cofa ukufowunela, kunye nokufowuna iZithuba nguMoxie ™.
Ukufikelela kumxholo, idatha, amaqabane, kunye neengcali ukwenza izigqibo ezingcono kunye nezikhawulezayo Ukuqonda okwenyani.
Izixhobo ezisebenzayo zokunciphisa ukushiya iwebhusayithi, ukubandakanya abathengi, kunye ukuqhuba ingeniso eyongezelelweyo kwi-Intanethi.
Ukusebenza kwe usasaze imiyalezo emanyeneyo, sasaza uhlaziyo olubalulekileyo, kwaye wandise ukungafihli kunye nengxelo kwiinkqubo zentengiso.
Izixhobo zokwenza ngempumelelo iinkqubo zokuthengisa kunye nokuthengisa kwaye ufumane idatha ebalulekileyo yabathengi.
Abasebenzisi abangene kule nkqubo bafumana ukufikelela kwizixhobo kunye nezixhobo ezinxulumene nomba abasebenza kuwo. Bakwanxibelelana nengcali efanelekileyo enesisombululo okanye impendulo kwingxaki ethile abahlangabezana nayo okanye ingcaciso ethile abayifunayo. Ixesha kunye nomzamo osindisiweyo wokukhangela ulwazi oluchanekileyo okanye umntu, okanye uphonononge amaqonga awahlukeneyo ukuze uthumele i-imeyile, uxoxe okanye usebenzisane ngezinye iindlela, ukonyusa ngokuthe ngqo kwimveliso nakwindlela yokusebenza. Ngokuxhobisa umsebenzisi ngobutyebi bezixhobo kunye nezinto ezinokubakho, ikwabangela ukuba izinto ezintsha zisebenze.
Kutshanje, uMoxie uye wandise ukusebenza kweZithuba nangakumbi ngokongeza iZithuba ze-imeyile kunye neZithuba zeNgxoxo. Zombini ezi zinto zisebenzayo zonyusa inkxaso yabathengi ngendlela enkulu ngokuphucula isantya kunye nomgangatho wokuphendula. Ikwaphucula ukusebenza kwenkqubo yangaphakathi.
Izithuba ze-imeyile zizenzekelayo zonxibelelwano lwe-imeyile kwaye zonyuse ukubonakala kolo nxibelelwano ebhodini. Iincoko zengxoxo, indawo yokusebenzisana yengxoxo yokwenyani, ukunika amandla iiarhente zokuzisa iingcali zemixholo ngqo kwiseshoni yengxoxo yabathengi.
tags: ziko lezikoimiguduuqhagamshelwanoInkonzo eyenzelweemailmoxieImidiya yokuncokola